Tsara ve sa ratsy ny milelaka ny tavanao ny alika? | Tontolo alika
Avelanao hilelaka ny tavanao ny alikanao?
Encarni Arcoya | | curiosities
Alao an-tsaina ny toe-javatra. Nody ianao ary renao ny alikao mivoaka avy any amin'ny sisin'ny varavarana. Faly izy fa tafaverina ianao ary ny hany tadiaviny dia ny hanaisanao izany sakana izany. Ary rehefa manao izany ianao mikotroka anao izy ary manomboka milelaka ny tavanao. Toa mahazatra anao ve izany?
Ity fihetsika izay matetika ataon'ny alika ity ary endrika fifandraisana aminao, indraindray dia raisina tsara nefa indraindray tsy. Fa tokony havelanao hilelaka ny tavanao ny alikanao? Andao hiresaka momba izany.
Toa tsy mampidi-doza izany, apetrakao amin'ny orona ny oronao alika rehefa miresaka aminy ianao, ny dite milelaka ny molony na ny takolany amin'ny lelany na rehefa miverina avy miasa ianao dia mitondra ny molotrao mankamin'ny alikao hanao veloma.
Mety hahatsapa toy ny a fanehoana fitiavanaFa rehefa te hanome azy ireo oroka ireo ianao dia manoro hevitra ny manam-pahaizana ny tsy hanao izany. ¿Inona ny simba?
1 Fa maninona ny alika no te-hilelaka ny tavanao foana?
2 Olana amin'ny fanorohana alika izay tsy mahazo ny fikarakarana ilaina rehetra
2.1 Inona avy ireo aretina hafa azo tratran'ny aretina?
3 Ka tsara ve ny ataon'izy ireo?
4 Ny zavatra tsara momba ny alikanao milelaka ny tavanao
4.1 1. Miaro anao amin'ny allergy izy io
4.2 2. Mikarakara anao izy
4.3 3. Ianao no sefo
4.4 4. Hatsarao ny toetranao
4.5 5. Omenao fiarovana koa izy
Fa maninona ny alika no te-hilelaka ny tavanao foana?
Ho an'ny alika, lick, lick, dia endrika fifandraisana. Amin'izany, ny zavatra ataony dia milaza aminao fa sakaizanao izy ary mankasitraka anao izy. Ankoatr'izay dia fihetsika izay azony hatramin'ny fahazazany. Ohatra, rehefa miteraka alika vavy ny alika vavy, ny zavatra voalohany ataony dia ny milelaka azy ireo hanadiovana azy ireo, ary koa manafana azy ireo. Izany no antony ianaran'izy ireo haingana. Rehefa mihalehibe izy ireo dia ampiasainy amin'ny reniny, miaraka amin'ny iray tam-po aminy ary eny, miaraka aminao koa izany. Satria mbola tsy alika alika kely ve ny miloka anao?
Ok izao ankoatry ny fananana dikan'ny fitiavana dia liana ihany koa. Tsy mijery ny tontolo iainana amin'ny tanany izy ireo, ary tsy mikasika an'izay rehetra hitany mba hahitana hoe inona izany. Mampiasa ny vavany amin'izany izy ireo. Noho izany dia milelaka, manaikitra ary fihetsika hafa izy ireo. Ho azy ireo dia fitaovana tena ilaina izy io ary iray ampiasainy isaky ny roa isaky ny telo, satria manome fampahalalana marobe ho azy ireo, tsy ny momba ilay zavatra ihany, fa momba ireo zavatra maro hafa koa.
Noho izany antony izany dia faly ny alika milelaka ny vava, ny tanana na ny tongotra mihitsy aza, satria ho azy ireo dia loharanom-pahalianana, fampahalalana marobe. Raha ny marina, amin'ity fomba ity dia azon'izy ireo atao ny mahalala ny toe-tsainao, na na marary ianao (tadidio fa misy tranga maro izay fantatry ny olona fa marary izy ireo noho ny biby fiompiny, izay tsy hijanona milelaka na manandrana manaikitra handriatra. eny amin'ny faritra manokana amin'ny vatany).
Ny fandavana izany fihetsika izany dia tsy tsara, fa sady tsy avelanao hanana safidy malalaka. Noho io antony io dia tsy maintsy mahita teboka mpanelanelana foana ianao mba tsy hanelingelina, ary miaraka amin'izay dia omeo ny alikao izany fampahalalana izany na ny mety hiseho aminao ny fitiavany anao.
Olana amin'ny fanorohana alika izay tsy mahazo ny fikarakarana ilaina rehetra
El Dr Neilanjan Nandi iza no fanafody mpanampy ao amin'ny Drexel University School of Medicine ary any Philadelphia no misy azy, hoy izy tamin'ny mailaka iray ny ankamaroan'ny vavan'ny alika dia manana bakteria betsaka, holatra ary viriosy. Ity dokotera ity no milaza izany ny roran'ny alika dia misy proteinina kely izay afaka manampy amin'ny fanadiovana na koa manampy amin'ny fanasitranana ratra na dia nanoratra taratasy mitondra ny lohateny hoe "Maninona raha manome oroka ny biby fiompinao?".
Nanamarika izany izy misy zavamiaina miavaka amin'ny alika fa tsy afaka miady na mandefitra ny olombelona. Ny bakteria sasany izay ao am-bavan'ny alika fantatra amin'ny anarana hoe E Coli, clostridium, camplylobacter ary salmonella, dia mety hiteraka ireo aretina ao amin'ny tsinay sy vavony an'ny olombelona.
Ny marina dia tsy tokony avelantsika hilelaka ny alikantsika isika, satria raha ny roran'ny alika dia mikasika ny hoditry ny olombelona ary indrindra ny olona iray izay miaina fiainana salama, dia tsy dia hisy olana loatra noho izany, na dia ny azo esorina ny rora sy ny otrikaretina alika mora amin'ny alàlan'ny fonon'ny moka amin'ny vava, ny maso ary ny orona ary na dia tsy fahita aza ny aretina mifindra amin'izao fomba izao, dia nanolo-kevitra ny Dr. Kaplan sakano ny alika tsy hilelaka ny ampahany amin'ny tarehy.
Etsy ankilany, Dr. John Oxford avy amin'ny Queen Mary University of London izay manam-pahaizana momba ny mikraoba dia nilaza alika tsy tokony havela hilelaka ny tavan'olona mihitsy, satria tsy ny mitondra rora ihany io fa mitsentsitra any amin'ny toerana tsy mahafinaritra ary manimbolo ny fofon'alika hafa koa, ka feno viriosy, bakteria ary mikraoba ny vavanao.
Inona avy ireo aretina hafa azo tratran'ny aretina?
Amin'ireto tranga ireto, ny aretina hafa toy ny kankana sy / na ny kitrokely dia azo jerena izay azo ampitaina amin'ny fanao izay mahazo ny anaran'ny coprophagia, aiza ny alika mihinana dikin'olon-kafa na milelaka ny fanesoan'ny alika hafa, hoy i Dr. Nandi. Dr. Joe Kinnarney izay filohan'ny American American Veterinary Medical Association ary avy amin'ny fanadihadiana dia naneho izany ny alikakely dia afaka manana atody kankana eo anelanelan'ny roapolo tapitrisa ao amin'ny lalan-tsinay Ao anatin'ny herinandro iray dia azontsika atao koa ny mametraka ny tranganà tovolahy iray avy any North Carolina izay very maso noho ny aretina kankana.
¿Misy loza hafa koa? Nilaza ny Dr. Neilanjan Nandi fa mila mailo ny olona tsy ny alika rehetra no te-hooroka sy hihinina. Matetika ny olona dia tsy mahalala rehefa matahotra ny alika, mahery setra na iharan'ny fihenjanana ary raha tsy mitandrina ianao ary apetaho amin'ny alika ny tavanao dia mety hanaikitra manaikitra izany.
Ary ny saka? Tsy azo inoana fa ho tratry ny saka ny olombelona satria tsy mihinana diky, na dia mahita ny bakteria antsoina hoe Pasteurella aza ny vavan'ny saka, izay mety hiteraka lymph node sy aretin-koditra, ity aretina ity dia fantatra amin'ny hoe tazo mararin'ny saka.
Mba hisorohana an'izany rehetra izany dia nanoro hevitra ny manam-pahaizana fa tokony hanoroka anao ny biby fiompinao, tokony ho izany koa alao antoka fa mifanaraka amin'ny fanaovam-baksiny ny biby fiompinao, tsy maintsy esorinao lavitra ny biby fiompinao ary mila manasa tanana tsy tapaka amin'ny savony sy rano ianao.
Ka tsara ve ny ataon'izy ireo?
Ny marina dia maro ny alika milelaka tarehy. Ary ny marina dia, raha mandinika kely ianao dia ho fantatrao fa samy misy "tombony", ary koa "olana" mety hisy vokany ratsy. Ka, mety ve izany?
Tsy maintsy jerenao izany ny alika dia tsy mitandrina ny fahadiovana vava na ny orony. Ao anatin'ny vava sy ny nify dia misy bakteria afaka mamindra anao ao anatin'io milelaka io. Saingy tsy midika izany fa tsy afaka mieritreritra ny alikanao milelaka anao ianao.
Raha ny marina, Raha mbola karakaraina tsara ny alika, manana ny vaksiny rehetra, voaravona ary salama tsara dia tsy tokony hisy olana. Na izany aza, zava-dehibe ihany koa fa, raha mandoka ny tavanao izy, dia tokony hadio fitondran-tena ianao. Izany hoe, sasao ny tarehy sy ny tananao aorian'io hilelaka io, mba hialana amin'ny olana mety hitranga.
Tsy tokony ho fitondran-tena mamporisika antsika izany, satria tsy ho ela ny alika dia hahalala izany ary te-hanao izany hatrany, fa raha mbola karakaraina tsara ny biby fiompinao dia tsy tokony hiteraka olana izany. Mazava ho azy, na izany aza, tsy maintsy mitandrina ianao.
Ny zavatra tsara momba ny alikanao milelaka ny tavanao
Raha nanana alika ianao, dia azo antoka fa indraindray ianao nanakaiky azy ary nolelainy ny tavanao. Amin'izay fotoana izay dia mety nanana fihetsika tsara ianao, izany hoe tsy miraharaha anao ary tianao ho nataoko aza izany; na ratsy, atsipazo izy ary sasao ny tarehy satria io fihetsika io no mahatonga anao hitebiteby.
Eny, araka ny efa noresahintsika teo aloha, maro ireo manohana na manohitra. Fa inona ny tohan-kevitry ny tsirairay?
Eto ianao hihaona inona no tombony avelan'ny alika hilelaka ny tavanao. Ekenao ve ireo fanambarana ireo?
1. Miaro anao amin'ny allergy izy io
Minoa na tsia, dia marina izany. Ny hery fiarovantsika ananantsika dia mihamafy rehefa miaraka amina alika ianao ary avelao izy hilelaka ny tavanao (raha mbola salama izy, mazava ho azy). Ny antony dia satria mifanerasera amin'ny biby ianao dia manampy ny fiarovanao ho avo kokoa noho izy ireo voaomana foana amin'ireo mpitsabo manimba. Raha ny marina, milaza ny manam-pahaizana fa tsara ny misoroka ny areti-mifindra na ny asma aza.
Raha manontany dokotera na matihanina ianao raha tsara kokoa amin'ny alika ny irery ny zaza, ny ankamaroan'ny ankamaroany dia milaza aminao fa ny biby dia afaka manampy ny zaza hanana hery fiarovan'ny vatana matanjaka kokoa, ankoatry ny fiaraha-miasa tsaratsara kokoa, ary manana tombony hafa. Ka nolaviny izany fanambarana izany.
2. Mikarakara anao izy
Inona no ataon'ireo bitika amin'ny zanany alika? Milelaka azy ireo tsy an-kijanona izy ireo, rehefa kely izy ireo mba hanome hafanana, hanadio azy ireo, hanome azy ireo hafanana ... Eny, misy zavatra toa izany aminao. Ny tadiaviny dia ny fahasalamanao.
3. Ianao no sefo
Mba 'hitandroana ny fihavanana', amporisihina ny alika hilelaka izay heverin'izy ireo ho lehibeny, fitondran-tena manaiky azy ireo hahafantaran'izy ireo fa tsy mikarakara fotsiny izy ireo, fa koa fantaro hoe iza no manana fahefana amin'izany fifandraisana izany.
4. Hatsarao ny toetranao
Eny eny. Rehefa mody ianao any an-trano, tsy te hiresaka na hiteny aminao ny hafa, ary manatona anao ny alikanao ary milelaka anao, na dia tsy tianao aza izany dia mety hanova ny toe-tsainao izany ary hitsiky ianao Ary mahazo izany fampitomboana ny haavon'ny dopamine sy serotonin anao. Ny milelaka kely dia afaka manao an'io (ary mamorona fahatsapana mitovy amin'ny oroka anao).
5. Omenao fiarovana koa izy
Tahaka ny anampiany ny rafitra fiarovanao dia toy izany no anampianao azy, satria ireo zavamiaina bitika ananantsika ataovy tombony koa ny hery fiarovanao ary mazotoa hatrany amin'ny mpanohitra ivelany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Avelanao hilelaka ny tavanao ny alikanao?
Antony mahatonga ny alika hisotro rano sy mandoa
Fa maninona ny alikako no mirenireny amin'ny tongony aoriana iray?